HRW: 34 qof oo la waayay dalka Kenya - BBC Somali
HRW: 34 qof oo la waayay dalka Kenya
20 Luulyo 2016
Ciidammada ammaanka ee dalka Kenya waxay khasab ku wateen ugu yaraan 34 qof labadii sano ee la soo dhaafay intii ay socdeen hawl gallo ka hortagga argagixisada oo tacaddiyo laga geystay magaalada Nairobi iyo gobolka woqooyi bari Kenya, ayay sheegtay warbixin ay maanta soo saartay hay'adda Human Rights Watch.
Hay'addu waxay sheegtay in mas'uuliyiinta Kenya looga baahan yahay inay joojiyaan xadgudubyada ka dhaca hawl gallada ka dhanka ah argagixisada, ayna si degdeg ah baaritaan ugu sameeyaan khasabka lagula baxayo iyo dhimashada maxaabiista ee woqooyi bari Kenya.
Warbixinta oo ka kooban 87 bog, waxay diiwaan gelisay 34 dhacdo oo ciidammada ammaanku ay hawl gallo kala duwan oo milaterigu ka mid yahay ay duullaanno ku qaadeen guryo iyo xarumo si ay u soo qabtaan dad la sheegay in lagu tuhunsan yahay inay xiriir la leeyihiin al-Shabaab.
laakiin bilooyin, mararka qaarna sannad kaddib, dadkaasi wax dacwad ah laguma soo oogin, qoysaskoodu ma ogeyn meel ay ku xiran yihiin.
Mid kasta oo ka mid ah kiisaskaas, inkastoo ay qoysasku boliiska u soo sheegeen dadka ka maqan, ayna mas'uuliyiin kala duwan weydiisteen in gacan laga siiyo sidii loo soo heli lahaa haddana maamulayaashu way ku guulaysan waayeen in la socodsiiyaan halka dadkaasi ku dambeeyeen ama inay si habboon baaritaan ugu sameeyaan eedaha tacaddiyada la sheegay.
Image caption Soomaalida degan waqooyi bari Kenya
Dadka woqooyiga Kenya waxay astaahilaan in laga difaaco weerarrada al-Shabaab ee ma ahan xadgudub kale inuu uga yimaad mas'uuliyiinta, ayuu yiri Kenneth Roth oo ah agaasimaha fulinta ee Human Rights Watch.
Hay'addani waxay muddo siddeed bilood ka badan baaritaanno ku saabsan tacaddiyada la sheegay ka sameysay magaalada Nairobi iyo degmooyinka woqooyi bari Kenya ee Garissa, Wajeer iyo Mandheera, waxayna waraysatay 117 qof oo ay ku jiraan dhibbanayaal iyo markhaatiyaal hawl gallada lidka argagixisada, iimaamyo, saraakiil dowladda, suxufiyiin, qareenno, dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa, xubno ka tirsan ciidammada boliiska iyo milateriga iyo hoggaamiyeyaasha bulshada deegaanka.
Human Rights watch waxay ogaatay in dadka la qabqabtay intii hawl gallada xagga ammaanka ay socdeen ay ku jiraan dhallinyaro asalkoodu Soomaali Kenyan yahay, iimaamyo iyo macallimiin iskuulo islaami ah.
Image caption Haweeney ninkeeda uu ka maqan yahay sanad
Nin da'diisu ahayd 48 jir waxaa uu Human Rights Watch u sheegay in markii hore lagu xiray saldhig boliis oo ku yaal magaalada Wajeer kaddibna lagu wareejiyay saldhigga milateriga Wajeer. Waxaa uu sheegay in ciidanka milaterigu ay markaasi kaddib soo xireen walaalkiis oo isla saldhigga milateriga lagu hayay.
Waxaa uu sheegay in ciidanku ay haraati iyo dharbaaxo iyo garaacid kala daaleen, ayna koronto ku qabteen, 15 maalmood kaddibna ay sii daayeen laakiin walaakiis meel uu ku dambeeyay aan la ogeyn.
Hawl gallada ka dhanka ah argagixisada waxay gobolka woqooyi bari Kenya ka bilawdeen kaddib weerarkii September 2013kii lagu qaaday xarunta dukaamada Westgate ee caasimadda Nairobi laakiin waxay sii xoogeysteen kaddib weerarkii bishii April lagu qaaday jaamacadda Garissa oo ay ku dhinteen 147 qof oo ay ku jireen 142 arday ahaa.
Al Shabaab ayaa sheegatay labadaas weerarba, waxayna kaloo sheegteen dhowr weerar oo kale oo waaweyn oo ka dhacay Kenya ayna ku iraan kuwa lagu qaaday woqooyi bari Kenya.